Marcos Rojo oo laga saaray shaxda xulka qaranka Argentina… (Maxay tahay sababtu?) – Gool FM
(Buenos Aires) 11 Nof 2019. Marcos Rojo ayaa laga saaray shaxda xulka qaranka Argentina, waxaana uu seegi doonaa kulammada uu xulkiisu la kala ciyaari doono xulalka Brazil & Uruguay.
Daafaca kooxda Manchester United ee Marcos Rojo ayaa laga saaray liiska xulkiisa qaranka Argentina, iyadoo sabab aan la sheegin uu ku seegi doono kulammada uu Waddankiisu la kala ciyaari doono Brazil iyo Uruguay.
Rojo ayaa sidoo kale ka maqnaa shaxda safka hore ee kooxdiisa Manchester United kulankii dhowaa ee shalay galab oo Axad ahayd ay la ciyaareen Brighton, isla markaana ay guusha ka gaareen.
29-sano jirkaan ayaase badal ku soo galay qeybtii labaad ee ciyaartaas oo ay 3-1 uga adkaadeen Brighton, markii uu waqtigii lagu kordhiyey dheesha uu bedelay Brandon Williams oo garoonka la baxay.
Si kastaba ha noqotee, saacado kaddib markii ay Man United guusha ku qaadatay garoonkeeda Old Trafford xiriirka kubadda cagta Argentina ayaa xaqiijiyey in Rojo inuusan qeyb ka noqon doonin xulka uu hoggaamiyo macallin Lionel Scaloni ciyaaraha caalamiga ah ee soo aaddan.
Rojo ayaan illaa iyo hadda la sheegin sababta rasmiga ah ee looga saaray ciyaaraha xulkiisa qaranka Argentina, iyadoo uu ka soo muuqday daqiiqadihii ugu dambeeyey kulankii shalay ee kooxdiisa Man United ay ciyaartay.
Argentina ayaa Habeenka Jimcaha ah ee soo aaddan waxa ay la ciyaari doonaan xulka Brazil, kaddibna waxa ay Isniinta xigta la dheeli doonaan Uruguay.